Anarana Breziliana ho an'ny beginners
Anarana Breziliana ho an’ny beginners
Mety efa nandre ny anarana fiteny maro ny fiteny sy fitenim-paritra. Ny fahasamihafana eo amin’ny teny, ny fiteny, samy hafa ny dikany mitovy amin’ny teny sy ny teny, fitenin-jatovo fiteny, ary ny hafa tsy fitovian — izany rehetra izany dia maro faritra, ny Jeneraly ny foto-kevitra ny fiteny portiogey. Tsy mba misaraka lavitra loatra ny lohahevitra, hoy aho fa eto isika dia hahafantatra ny iray amin’ireo karazana anarana dia Breziliana. Mitovitovy miteny izany no tena zavatra, fa kely mihady lalina kokoa ianao dia hahita ny endri-javatra miavaka ny zavatra Lisbon na, ohatra, zavatra avy amin’ny Kaaba Verde (Cape Verde), Mozambika ary Angola. Hendry ao an-tendrombohitra dia tsy mandeha.
Izany fanontaniana izany ahiahy rehetra izay niainga mba hianatra zavatra na araka izany dia antsoina hoe Breziliana iray fiteny. Manomboka amin’ny dingana kely, mora sy tsotra, mba hanao izay dia tsy toa tsy ho herisetra ny sasany. Raha toa ianao ka ampiasaina mba mamolavola drafitra asa, dia mety ho tena manampy. Ary raha tsy, miaraka isika tsikelikely ny hifindra any amin’ny lalana marina, toy ny hoe: ‘kokoa faingana, tsy ampy ny hafainganam-pandeha’. Raha toa ianao ka ampiasaina mba mifindra fifadian-kanina ary ity ohabolana dia tsy ny momba anao, dia misy ihany koa ny safidy ny turbo-pandeha ny fampiroboroboana ny nofy. Izany no fomba haingana be sy mafy kokoa ary ny vokany dia miseho ho be teo aloha.
Izay lalana tianao, dia manapa-kevitra
Izaho sy reserve ihany an-tsitrapo hanampy, dia te hanome amin-kitsimpo ireo izay te-hianatra teny portiogey, tsy milaza fotsiny hoe ‘tiako’. Aiza no hanombohana ho an’ny mpanao voalohany izay vao avy nahazo ny hevitry ny tena ny fianarana fiteny portiogey, tsy misy tokony hijery lavitra. Rehetra izany no ilainao dia pen, — taratasy, ary koa mazoto ezaka mafy orina ny fanoloran-tena, mafy tapa-kevitra sy ny faniriana lehibe
← Ny lahatsary amin'ny chat American roulette
Ny fomba hitsena ny vehivavy manambady, fivoriana manambady vehivavy, ny Fiarahana →